Runtastic Moment Classical, famakafakana an'ity | Vaovao IPhone
Miroborobo ny indostria anaovan'akanjo. Mihamaro ny bracelet sy hetsika famantaranandro eny an-tsena, miaraka amin'ny Apple Watch no iray izay mifangaro tsara indrindra amin'ny iOS hatreto. Na izany aza, mety misy ny olona maniry ny fanaraha-maso hetsika tsotra nefa tsy mila mamerina ny fitaovana isan'andro na manome famolavolana tsara tarehy.
Eto no miditra ireo vaovao Famantaranandro Runtastic Moment, volavolan-drafitra marobe ho an'ny tsiro rehetra izay mikendry ny handrakotra izany banga misy eo amin'ny fehin-tanana izany sy ny smartwatch. Nandritra ny andro vitsivitsy dia nanandrana ny kilasika izahay, noho ny zavatra tiako manokana, dia mifidy famantaranandro somary be loatra aho ary misy endrika kanto, mandritra ny androm-piainana ary mihoatra na latsaka, ny Runtastic Moment Classic dia manatanteraka ireo toerana ireo. Andao hojerentsika ny fomba amin'ny antsipiriany kokoa.
3 Vidiny fotoana fohy
Ny Runtastic Moment dia tonga amina fonosana mitovy amin'ny an'ny fehin-tànan'ny orinasa. Tsy ilay mahazatra ilay boaty ho an'ny famantaranandro, fa mahita kosa isika blister plastika mazava izay mamela antsika hahita ny fisehon'ny famantaranandro.
Rehefa manokatra ity boaty ity isika dia mahatsapa fa amin'ity fizarana ity, Runtastic dia afaka nanamboatra azy kely kokoa. Miresaka famantaranandro 199 euro isika ary misy pitsopitsony sasany izay tokony hokarakaraina bebe kokoa tamin'ny famelabelarana. Ny étiro dia nopetahana fantsona ao anaty baoritra, ny boaty dia tsy mendrika hitahiry soa aman-tsara ny famantaranandro rehefa tsy ampiasaintsika na asiana iray hafa eo aminy, sns.
Azoko tsara fa ny maodely mora indrindra dia mahazaka fonosana toy izany nefa mitentina 199 euro, mamela antsika a fahatsapana voalohany nangatsiaka kely Soa ihany fa very izy io rehefa eo am-pelatanantsika ny famantaranandro.
Vantany vao nesorinay ny atin'ny boaty rehetra dia ho hitantsika izany:
Visy fanoloana efatra ho an'ny sarony boaty
Ny famantaranandro eny an-tànana dia tena tsara tarehy, farafaharatsiko tiako izany. ny Trangam-by vita amin'ny metaly 42 mm amin'ny savaivony dia manome azy io hikitikitika kanto sy mahazatra ary be pitsiny noho ny karazan'akanjo samihafa
Ny fanaingoana ny dial dia tena tsotra ihany koa ary tsy misy frills. Ny sphere kely eto ambany fotsiny dia ho referansa fehezinao ny asa ataontsika isan'andro mandra-pahatonga any amin'ny tanjona napetraka ao amin'ny fangatahana. Mazava ho azy fa io fahatsorana io dia manery antsika hitodika amin'ny iPhone rehefa te hahita antontanisa amin'ny antsipiriany misimisy kokoa toy ny halavirana, isan'ny dingana, fotoana fanaovana hetsika sns Mazava fa raha tianao ny hanao spaoro dia angamba tokony hiloka amin'ny Orbit Runtastic.
Ny bokotra tokana amin'ny lafiny ankavanan'ny famantaranandro dia ny ampandehano ny rakotra fatoriana. Tsindrio izany mandritra ny segondra vitsivitsy ary fampandrenesana mihetsiketsika malefaka dia hanondro fa efa vonona hatory ny zava-drehetra, ho fanampin'izay, ny fanjaitra amin'ny dial dia hanondro volana iray ary hahafantatra ihany koa fa ao anatin'ny Runtastic Moment maody alina. Rehefa mifoha maraina, dia averintsika ny fandidiana ny fanindriana ny bokotra ary hanomboka indray ny firaketana ny hetsika isan'andro.
Ny fehin'ity modely Runtastic Moment ity dia hoditra mainty, malina be. Ilay buckle dia mampiseho ny famaranana vy vita amin'ny volony ary misy ny sary famantarana ny orinasa voasokitra eo aminy. Ny antsipiriany iray izay tiako momba ny tadiny dia ny tsimatra izay manamboatra azy amin'ny toeran'ny fiambenana dia azo esorina tsy mila fitaovana, zavatra iray manamora ny fanovana azy amin'ny hafa mitovy habe aminy.
Mikasika ny fizakan-tena dia mbola aloha loatra ny fananana referansa fa mampanantena izany i Runtastic ny bateria Lithium CR2430 dia haharitra amam-bolana maro tsy mila manova azy, zavatra azontsika atao amin'ny tenantsika miaraka amin'ny screwdriver tafiditra ary fahaizana kely. Tsy isalasalana fa ny tsy fisian'ny efijery backlit sy ny fampiasana ny Smart Bluetooth manampy hahatratra ny fiainana bateria raha toa ka toy ny mahazatra hatrany, dia hiankina amin'ny isan'ny fotoana ampifanarahantsika amin'ny iPhone ilay famantaranandro.
Mba hamaranana, amin'ny faritra ambany dia afaka ahitantsika ny toetra mampiavaka ny famantaranandro na dia mety iray aza no tena mahaliana azy fanoherana ny rano hatramin'ny 100 metatra lalina.
Araka ny hita, ny Runtastic Moment dia famantaranandro miaraka amn'ny rivotra mpanara-maso hetsika. Heveriko fa somary vitsy ny olona te-hanoratra ny asany isan'andro nefa amin'ny maha-te hahafanta-javatra ary ity vokatra ity dia mety indrindra satria tsara ny fizakantenany dia tsy voamariky izany ary azo alentika anaty rano tsy misy olana.
Raha te hahalala bebe kokoa ireo angona voarakitra an-tsoratra dia ampifanarahanay amin'ny iPhone ny iPhone Runtastic Me fampiharana ary vonona. Ny famantaranandro dia afaka mitahiry hetsika mandritra ny fito andro tsy misy fahatapahana ka tsy ilaina akory ny mampifandray azy ireo amin'ny finday isan'andro.
Vidiny fotoana fohy
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny maody Klasika mitentina 199 euro izany Na dia betsaka aza ny maodely azo isafidianana ary afa-tsy noho ny antony hatsarana, dia mitovy ny fiasan'izy ireo amin'ny faritra rehetra:
Afa-tsy ny maodely Elite, ny ambiny koa dia misy amin'ny alokaloka samihafa hisafidianana izay tiantsika indrindra.
Fahaleovan-tena sy fanoherana ny rano
Fonosana azo hatsaraina
Ny fiankinan-doha amin'ny finday hahafahana mamaritra ny fotoana (azo atao raha tsy maharitra)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Runtastic Moment Classical, famakafakana ity famantaranandro ity amin'ny rivotra azo entina
Felix zamora dia hoy izy:
Salama, tiako ianao hanampy anao hamaha ny olan'ny fifandraisako eo anelanelan'ny elite Runtastic Moment sy ny iPhone SE-ko. Maniry anao FALY taona ...
Valiny tamin'i Felix Zamora
Plex dia azo alaina amin'ny Apple TV 4